Ahmiyada Taleefoonada Loogu Yeedho Safarka Macaamiisha | Martech Zone
Khamiis, Juun 2, 2015 Khamiis, Juun 2, 2015 Douglas Karr
Mid ka mid ah astaamaha aan bilaabayno annaga diiwaanka wakaaladda is Guji si aad u wacdo. Dhawaanna, waxaan u kireysanay kaaliye dal-ku-gal ah hay'addeena. Waxa aan si xanuun leh ugu baraarugnay ayaa ah in himilooyinka qaarkood iyo ganacsatadu si fudud aysan ganacsi u sameyn karin illaa ay taleefanka ka qabtaan oo ay diraan meheradda.
Marka laga reebo helitaanka, arrinta kale ayaa si fudud ugu habboon. Dad aad iyo aad u tiro badan ayaa u adeegsanaya aaladaha mobilada baaritaanka iyo helitaanka meheradaha ay rabaan inay ku xirmaan. Awoodda si fudud loogu xiriiri karo waxaa jira wax walba oo ku habboon. Haddii aadan haysan oo kuwa kula tartamaya ay qabtaan, waxay u badan tahay inay soo wacayaan mana heli doontid. Taasi maahan aragti - Xogta Invoca waxay muujineysaa in wicitaanada taleefanka ay keeneen 30% ilaa 50% xawilaad beddel halka qasabku uu dhaliyay 2%.
Invoca waxay falanqeysay in ka badan 32 milyan oo wicitaanno ah in ka badan 40 warshadood oo ku yimid nidaamkeeda sanadkii la soo dhaafay, waxayna caddeysay aragtida saameyneysa dhammaan suuqleyda maanta: isticmaalka moobiilka oo kordhay wuxuu wadaa wax ka badan uun is-dhexgalka dhijitaalka ah ee shaashadda yar - mobilada ayaa wicitaano fara badan ku haya meheradaha.
Invoca waxay falanqeeysay in kabadan 32 milyan oo wicitaano ah dhamaan warshadaha si loo ogaado sida wicitaanada taleefanku saameyn ugu yeeshaan suuq geynta dijitaalka. Hubi Invoca's infographic si aad wax badan uga ogaato muhiimada wicitaanada ee safarka macaamiisha, kanaalka dhijitaalka ah ee wicitaanada wada, iyo isbedelada wicitaanka xiisaha leh. Waxa kale oo aad ka heli kartaa xitaa xitaa stats la yaab leh, aragti, iyo talooyin waxtar leh sida kuwan oo kale ah Tusaha Sirdoonka 2015.
Tirakoobyada muhiimka ah ee lagu sii daayay sawirkan:
Macaamiisha ayaa jecel inay soo wacaan markay soo wacaan rabto inaad iibsato. 61% dadka mobilada raadiya waxay dhahaan guji-wac waa kan ugu qiimaha badan wajiga iibsiga.
Macaamiisha ayaa jecel inay soo wacaan markay u baahan yihiin gargaar. 75% macaamiisha ayaa leh wicitaan taleefan waa habka ugu dhakhsaha badan ee jawaab looga helo.
Macaamiisha ayaa jecel inay soo wacaan markay adeegsadaan raadinta moobiilka. 51% waxay yiraahdaan had iyo jeer ama had iyo jeer waxay u baahan yihiin inay ka wacaan meherad xayeysiiska raadinta moobiilka.
Tags: Safarka macaamiishawicitaanada soo galainfographicinvocawicitaanada ganacsiga mobiladataleefannada gacantabeddelaad mobilewicitaanada dibeddaphone